Ukuvuvukala: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa amakhambi abantu for izinsana abadala
ukuvuvukala (izimbangela kanye nokwelashwa amakhambi abantu zichazwe lesi sihloko), ngokuthi ukubuyisa kungenzeka uma ngokweqile igesi kwetinhlavu ipheshana wokugaya ukudla. Kuye ngezinga imithetho babe munye noma zokugula sina. Iletha umuntu kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu, ikakhulukazi lapho igesi ngokwahlukana kwenzeka angesabi futhi iphunga isici.
igesi kumiswa kwenzeka ukugaya ukudla. Zidlala indima ebalulekile amagciwane ikoloni amathumbu enqubeni. Ngokuvamile ngosuku e pheshana emathunjini ukhiqiza cishe 1 ilitha amagesi ingxenye wabo ugxile imithambo yegazi colonic, futhi ingxenye (100-500 ml) kungenziwa etholakala ngokwemvelo.
Ukuvuvukala e abadala bangase ukuthuthukisa ku ngemuva ukungondleki noma izifo ipheshana wokugaya ukudla.
Amagesi ukusiza ukugqugquzela emathunjini peristalsis sezinyawo bubheke ingemuva kanye neqhaza ukususwa kwabo kusuka emzimbeni. Inani enkulu ka gas akha itholakala izihibe ikholoni, isisu emathunjini amancane, zingabantu inani eliphansi.
Ukuvuvukala: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa amakhambi abantu
Ukubhodla akuyona njalo kukhombisa isifo ipheshana wokugaya ukudla, ikakhulukazi amathumbu. Ukubhodla kungaba eziphelayo futhi zenzeka:
ngesikhathi ukusebenzisa uphuzo carbonated obuningi;
Isidlo sasemini ebaleka - ngalesi sikhathi umuntu iphuza omningi, futhi kukhona umoya esiswini, ukuqunjelwa,
ethola umlotha isilungulela - ke ihlangana juice esiswini futhi inike semali carbon dioxide emathunjini;
ukusebenza ngaso ephakeme - kulesi simo, ngenxa ingcindezi ushintsho futhi kungenzeka ukubuyisa;
ethola ejenti kwemithi (laxatives, izidakamizwa lokulungiselela luhlolo endoscopic, nabanye).
Ngu izimbangela zokucabanga okubangelwa isifo ukuvuvukala yilezi:
izifo pheshana emathunjini (yesifo, pancreatitis).
Ngaphezu kwalokho, abangele ukwakheka ngokweqile igesi emathunjini izici psychogenic kungenzeka ezifana ukucindezeleka okunzima noma neurosis.
amakhambi Ukwelashwa Folk ezingase zithathwe kuphela emva kokubonisana uchwepheshe. Ngokuvamile, ukuqeda le uphawu Iziphungo esetshenziswa amakhambi - Mint, chamomile, fennel. Ukusetshenziswa ngokuyikho izaqathe kanye imbewu fennel ne-ginger fresh.
Ukudla ezibangela ukuvuvukala
Yokungadli ukudla okuthile futhi kungaba imbangela ukuvuvukala nemizwa wamathumbu distension. Kulokhu-ke kuyadingeka ukunciphisa ukusetshenziswa:
kvass futhi ubhiya;
Ukuvimbela ukuvuvukala, kwanele ukuba kulesetayelekile ekudleni kwakho kanye abawaphuzayo imikhiqizo eyingozi.
Ukuvuvukala kanye wamathumbu akusona isifo kodwa uphawu nokwephula ngaphezulu umsebenzi pheshana emathunjini. Ukubhodla libhekene zimpawu ezilandelayo:
umuzwa wobukhulu nokuphatheka kabi esiswini;
ukubuyisa kanye negesi kwemvelo;
kwentaba esiswini, okubonisa inqubo ukuvutshelwa esiswini namathumbu;
nokubhamuka noma inwabi;
Kuyadingeka ukuba anake ukubonakaliswa izimpawu ezivela uma lo mkhuba ukuvuvukala. Izimbangela kanye nokwelashwa amakhambi abantu lenyuka production igesi kufanele kuhlanganiswe.
Ukuvuvukala kungase kubonise nezinkinga amathumbu, okuyinto ephazamisa ukumuncwa kugaywe ukudla izinto, okuyinto luhambisana nomthwalo nezinkinga nge izinqubo umzimba emzimbeni, ukucobeka, ukuqwasha kanye kwehle ukuzivikela mzimba.
Indlela elula futhi esebenza kakhulu yokuvimbela ukutheleleka ukubuyisa futhi ukuvuvukala - ukushintsha ekudleni kwakho. Ukususwa kusuka nsuku zonke Ukudla ukudla ezibangela ukubuyisa, ungakwazi ngokushesha nangempumelelo ukuqeda ezingemnandi izimpawu of ukuvuvukala kanye nobuhlungu esiswini.
Ukudla ukubuyisa okuhloswe ukuwakhipha kusuka Ukudla ukudla zakho ezibhalwe ngenhla. Nakani! Njengoba wonke umzimba ihlukile, kubalulekile ukuqapha isimo sabo. Abanye abantu abangela ukudla ukubuyisa okunamafutha (isib inyama), kuyilapho abanye abangela ukuvuvukala kungenziwa wabhaka ubumnandi ezithile.
Imifino nezithelo ziyazithokozela, abaningi futhi imbangela igesi anda wamathumbu distension. Ngakho-ke kungcono udle steamed noma steamed imifino, izithelo kanye amajikijolo asetshenziselwa nokwenza izithelo compotes kanye izithelo puree.
Uma lezi zindlela izinguquko ekudleni musa asize, udinga ukususa imikhiqizo yobisi amasonto ambalwa. Zingadala ukuvuvukala lapho enzyme ukuntula (ukungezwani ne-lactose).
amakhambi abantu kusukela ukukhiqizwa gas anda: ukuvuvukala
Ngu ukubuyisa kusiza ngokuphelele decoction of chamomile. Ngu izakhiwo ezuzisayo izitshalo zokwelapha kungukuthi kuphela ukunqanda isimiso sezinzwa futhi ukwanda amasosha omzimba, kodwa futhi ukuqedwa ngokweqile igesi kumiswa emathunjini. Ukulungisa umhluzi ezidingekayo ukuthatha 1 tbsp. l. zokusetshenziswa uthele ingilazi yamanzi abilayo. Decoction kufanele bagcizelele cishe 15-20 imizuzu futhi uthathe zonke amahora 5 isigamu inkomishi.
Ukuthola imbewu isanqante kudambisa ukuvuvukala. Kuyadingeka ukuba ugaye nedlanzana imbewu grinder ikhofi kanye isipuni kuthathwe kathathu ngosuku.
Phakathi ukupheka, okubangela ukubuyisa, kumelwe wengeze nekhumini. Lokhu kuzovimbela ukungakhululeki ngemva kokudla futhi ukuvuvukala. Ukwelashwa izifo wokugaya ukudla kudinga ukunakekelwa, ngakho ngaphandle lodokotela kungcono ukuba angenzi imithi.
Ekuseni ngaphambi kokuba kudliwe ukuphuza ingilazi asanda isibambo amazambane juice. Emva kokuthola edingekayo cwilisa imizuzu 20-30. Omunye ihora ngemva reception usungaqala ibhulakufesi. Ukwelapha ngale ndlela kuyinto izinsuku ezingu-10. Khona-ke kudingeka wenze ikhefu izinsuku ezingu-10 futhi kaningi ukuba kudlule Yiqiniso sezinsuku ezingu-10 yokwelashwa amazambane juice.
Neonates wayevame ukubhekana nezinkinga isimiso sokugaya ukudla bungene, ngoba namanje akwanele izitho akhiwa futhi kungukuthi bazivumelanisa ephezulu grade ukugaya. Ezinyangeni zokuqala zokuphila zingavela njalo umoya esiswini, ukuqunjelwa kanye negesi. Ukwelashwa lokhu izimpawu ezingemnandi engenziwa usebenzisa amakhambi kwemithi noma abantu.
Ukuvuvukala ingane ingase ibe umphumela hhayi kuphela yokungapheleli umzimba, kodwa Ukudla obungafanele overfeeding. Kulokhu, lapho esiswini avele umdwebo izinhlungu, kwentaba kanye nokuhlukumezeka. Njengoba izingane kunzima carminative ke kukhona emathunjini bese esiswini amajaqamba, beletha ingane ubuhlungu eqinile. Yingakho ukubuyisa futhi colic ezinyangeni zokuqala zokuphila kubhekwa evamile, kodwa ukuletha kanye nengane, kanye nabazali eziningi ngokuphazamiseka.
Zonke lezi zimpawu zinezikhathi ukuvuvukala. Izimbangela kanye nokwelashwa amakhambi abantu aziwa wezingane zonke izinsana sika. Ukwelashwa kumele enikezwe udokotela ukuba khona. Ukusebenzisa amakhambi abantu ngaphandle kokubonisana yezokwelapha ngaphambi kuhambisana inkinga ekhulayo kanye nokuthuthukiswa nezifo ezingamahlala khona.
ukwelashwa ukubuyisa ezinsaneni
Kukhona inani elikhulu ejenti kwemithi ezikhipha umoya esiswini, ukuqunjelwa kanye amagesi. Ukwelashwa wenziwa ingane imithi ezilandelayo:
kunciphisa inani igesi emathunjini ( "Espumizan");
okuholela aphume amagesi emathunjini (namalahle ocushiwe);
ukunciphisa microflora emathunjini ( "Bifiform").
Udokotela angase anikeze isiguli imithi kuwo wonke amaqembu amathathu, ukuze wenze ngendlela ephumelelayo ku inkinga futhi sisheshe ukubuyisela nomzimba wengane. Ngaphandle somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela akudingekile ukunikeza ingane noma yimuphi umuthi, njengoba ungenza umonakalo. Ngaphambi kokuthatha imithi, kumele kutholakale imbangela yokushona ukuvuvukala futhi iwukudambisa it.
amakhambi Folk ekwelapheni izinsana
I kunazo owaziwa abantu ikhambi ukubuyisa ezinganeni kuyinto amanzi dill. Ukuze ekuwulungiseleleni liyadingeka isipuni omisiwe dill futhi isigamu ilitha lamanzi abilayo. Kufanele bagcizelele 3-4 amahora ukuthatha isipuni emva kokudla izikhathi eziningana ngosuku. Dill ingasetshenziswa njengoba ithengwe ekhemisi futhi wenza bebodwa.
Ngakusasa ethandwa kakhulu iyona benomhluzi fennel - izakhiwo zalo kunganciphisa ukubuyisa futhi iwukudambisa umuzwa ukuvuvukala futhi colic. Odokotela batusa ukuthi nabancelisayo baphuze itiye fennel, ingane kulula ukubekezelela lithathelwe uhlobo olusha lokudla.
It ubhekana ukubuyisa, ne-ginger. Kwanele ukunikeza ingane ngemva kokudla ukusivumela ucezu ginger. Lokhu kuyokwenza ugcine ingane nemizwa yokuzizwa ukudla futhi ukunciphisa ukuvuvukala. Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi Folk of anda igesi kumiswa emathunjini Kwenziwa kuphela kwemvume udokotela wendawo, uma kungenjalo ungenza umonakalo ingane inkinga ibhebhetheke.
Izimbangela nezimpawu mumps
Laryngotracheitis. Ukwelashwa kwe-isifo ezinganeni.
Ngaphansi webele kwesokunxele libuhlungu: izimbangela nemiphumela
Hernia Inguinal. Ukusebenza noma ukuzilimaza?
Kungani ngiba buhlungu ohlangothini lwesobunxele ngaphansi isiphanga?
Ukupheka ngokwakho. isinongo Ideal for inkukhu
Ibha Quest ibha - isihluthulelo bathuthuke
Izimpethu emathunjini ezinganeni: izimpawu, imiphumela kanye nokwelashwa kungenzeka
Kanjani ukuze ungeze zokubhalisa lokuvinjelwe kuphoqeleke
Ufa Eminyuziyamu: uhlu ezindaweni ezithakazelisayo kunazo emzini
Heroes "Dota 2". Uhlu amakhono
Ukwenza uzibuthe ekhaya
Marriott Intaba 5 Ihhotela
'Skyrim': Guardian Izimpawu. Indawo kanye amabhonasi amatshe
Ukuphathwa Izikhungo: indlela ukukhubaza "SMS-inkhulumomphendvulwano" ukuze "Beeline"?
Kanjani ukusuka Budapest eVienna ngesitimela, ngebhasi, imoto, isikebhe eDanube
Indlela yokwenza Izibuyekezo imali inthanethi? Ukwenza imali inthanethi lisha?